Dawladnimadu “Waxey Ila Tahay” Kuma Shaqeyso. Distoor Ayey Ku Dhaqantaa | Horn Cable TV
Posted by khaalid Cismaan Ilaahey abaarta ha inaga qaado oo dhibaatadaa dadkeena heysaa dheef xalaal ah ha uugu bedelo. Dadka dhibaatadu heysataa inaga ayuunbey inala mid yihiin, balse nasiibka uunbaa iyana miyi dejiyey, inagana magaalo ina dejiyey. Waxa dhici kari laheyd ineynu halkooda ku jiri laheyn iyana halkeenaa ay ku jiri lahyeen. Ilaahey roob uumuu waayin, balse inaga ayaa la inagu imtixaamayaa.